NOOCYADA UGU FIICAN EE HILIBKA DOOFAARKA: SHARAXAAD, FAA'IIDOOYIN, FAA'IIDO DARO - XOOLAHA
Waa maxay doofaarradu waa hilib: u baro nuucyada ugu wax soo saar badan
Caadi ahaan doofaarrada ayaa la kiciyaa si ay u soo saaraan baruur. Laakiin weli, hilibka doofaarku ma laha nafaqo iyo dhadhan.
Hilibka doofaarka waxaa loo isticmaalaa in lagu kariyo cuntooyin badan oo adduunka ah, kaliya Muslimiintu ma cunaan. In caan ku ah, waxay la tartamaysaa digaag, laakiin dambe ayaa aad uga liita doofaarka ee juicyiness.
Intaa waxaa dheer, adduunka casriga ah, halkaas oo dad badani ay la tacaalaan cayilka, waxay faa'iido badan u tahay inay koraan hilibka doofaarka.
Sidaa daraadeed, waxaan kuu ogaan doonaa naasaha doofaarka ee soo saara qadarka ugu badan ee sheygan. Ha ilaawin inaad ku ogeysiiso sifooyinka muuqaalka mid kasta oo ka mid ah noocyada, waxqabadka iyo shuruucda daryeelka lagama maarmaanka ah.
Maxay yihiin farqiga u dhexeeya hilibka doofaarka doofaarka?
Doofaarka doofaarka waxaa jira saddex jiheyn oo muhiim ah ee soo saarista xayawaankaas, sida ku cad qeybta dhagaxyada oo dhan.
Midka koowaad waxaa ka mid ah noocyada dufanka nooca dufanka.
Noocyadaasi si sahlan ayaa loogu kala qaadi karaa xitaa dibedda dibadda, maxaa yeelay waxay leeyihiin jir aad u qoto dheer oo ballaaran. Qaybteeda hore waxay u muuqataa mid ka culus dhinaca dhabarka, inkastoo jajabku sidoo kale waa mid culus. Nooca magaca noocan ah waxa uu noqonayaa mid cad in uu heysto kaydad badan oo ah unugyada adipose.
Xaqiiqdu waxay tahay in horaantii sanadku badh yahay koritaanka murqaha muruqyada ee xayawaanku yar yahay. Baqtiga doofaarkan waxaa ku jiri kara qiyaastii 40-45% dufanka laga soo saaro dhammaan baqtigga, halka hilibka ku jira uu ka yaryahay 53%.
Nooc gaar ah waxaa ka mid ah noocyada guud ee doofaarrada, ama hilibka.
Doofaarrada noocan oo kale ah da 'yar ayaa soo saari kara hilib tayo sare leh. Hilibka doofaarka ayaa si deg-deg ah u kordha miisaanka nool, iyo dadka qaangaarka ah xataa xitaa dhibaato la'aan waxay soo ururisaa unugyo badan oo dufan leh. Sidaa daraadeed, xaddiga hilibka hal baqtigu wuxuu noqon karaa 53 ilaa 65%, baruurta - laga bilaabo 29 ilaa 37%.
Ugu dambeyntii, kuwa doofaarrada ah, oo ku saabsan naasaha aan rabno inaan u sheegno - hilib ama hilib doofaar.
Dhanka kale, doofaarka sida caadiga ah waxay leeyihiin jidh jidh dheera oo aan gaarin qallalka qoto dheer. Marka la barbardhigo naasaha qulqulka ah, qaybta hore ee ka mid ah waxay ka yar tahay dhabarka, taas oo ay ku jirto jajab aad u culus.
Qiyaasta cabbiraadda ee jirka oo dhan ee shakhsiyaadkaas ayaa sida caadiga ah muujiya tilmaamo ka weyn inta lagu cabbiro xabadka. Farqiga kale ee doofaarka xayawaanka ah ayaa ah in nooca hilibka doofaarka uu awoodo inuu yeesho unugyada muruqyada si aad u xooggan, halka baruurta si tartiib ah loo dhigo.
Kuwa yaryar doofaarka noocyada noocan ah koraan si dhakhso ah iyo horeba da'da lix illaa toddoba bilood, calaamadaha miisaankooda ku nool waxay gaari karaan 100 kiilo (haddii aad raacdo dhammaan xeerarka quudinta). Iyada oo ku xiran midabka, hal baqtigood wuxuu ka kooban yahay 58-67% hilibka, halka baruurta ku jirta ay weli tahay 21-32%.
Ka fikir wakiilada ugu caansan ee nooca hilibka doofaarka.
Doofaarka Bacon wuxuu ku jiraa Duroc: inaad barato dhamaan sifooyinka
Muuqaalka wakiilada hilibka doofaarka Duroc
Tani waa mid aad u ballaaran. Dhererka jirka ee shakhsiyaadka laba-laboodka lab ah ee lab ah ayaa gaari kara 1.8 mitir, waxna dhadhan yar ayaa ku yar.
In sifooyinka guud ee hiddaha hilibka doofaarka, waxaan ku soo sheegnay in ay leeyihiin qaab muuqda oo dheeraad ah, si kastaba ha ahaatee, kiiskan, ma aha oo dhan waa sidaas.
Carcass doofaarradu aad u ballaaran iyo ballaadhan, oo leh qaab muuqda oo gaaban. Isla mar ahaantaana, madaxa waa mid aad u yaryar, dhegabyo fiiqan ama soo horjeeda.
Doofaarkani waa kuwo firfircoon, gaar ahaan da 'yar. Tani waxa ay si weyn uga qayb qaadataa lugaheeda xooga badan iyo durbaba, kuwaas oo kor u qaada baqtiga sare ee dhulka: iyadoon loo eegin culeyska xayawaanku gaadho, caloosha dhulka ku dhejin maayo.
Dibedda, noocaan ayaa sidoo kale lagu kala saari karaa midabka maqaarka. Waxaa laga yaabaa in midabo kala duwan oo casaan ah: waxaa jira doofaarro iyo dahab fudud oo bunni madow, dhab ahaantii bunni. Naxwaha waa dherer dhexdhexaad ah, midabku waa isku mid sida maqaarka xayawaanka.
Dabcan, doofaarradu waxay noqdaan kuwo firfircoon marka la barbardhigo da'da, maaddaama ay bilaabaan inay miisaan culus helaan. Sidaa daraadeed, hal qof qaangaadh ah ayaa xitaa miisaankiisa 250 kiiloogaraamaya Isla waqtigaas, miisaanka ugu badan ee dufanka wuxuu noqon karaa 3 sentimitir.
Waxaa habboon in la ogaado in xitaa doofaarka nooca doofaarka, tani waa tilmaame aad u hooseeya. Hase yeeshee, sababtoo ah qadarka hilibka ee boogta Durok waxay noqon kartaa 80%.
Intee ayuu sarre u yahay wax soo saarka beeraha Durot iyo sida loo kordhiyo
Iyada oo hoos imanaysa wax soo saarka doofaarka, waa in lagu dhejiyaa inta jeer ee hilibka iyo dufanada laga heli karo hal baqdin, oo kharash yar oo dhaqaale ah. Waxaan kor ku soo sheegnay in caanahaani ay awood u leedahay inay soo saaraan ilaa 80% hilib ka yimid hal bakhti ah, hase yeeshee taasi waxay suurtagal tahay oo keliya in la cuno hilib hilib hilib.
Gaar ahaan, si loo helo natiijooyinkaas, waxaa muhiim ah in xoolaha lagu siiyo cuntooyin badan oo borotiin ah. Laakiin ha ka niyad jabin doofaarka Duroc, sababtoo ah quudin ku habboon ayaad la yaabi doontaa sida doofaarradu waxay si dhakhso ah uga faa'iideysan doonaan cabbirka iyo miisaanka.
Taasi waa, dhowr bilood oo ah quudinta degdegga ah - waxaadna haysataa ugu yaraan 100 kiiloogaraam oo hilib qurux qurux badan. Iyada oo da'da, habka lagu helo miisaanka jirka ee ku dhow lama joojin doono, haddii aadan xisaabta ku darin.
Waxaa la tijaabiyey in la xaqiijiyay in xaaladaha xabsiyada ay si aad ah uga muuqdaan waxsoosaarka doofaarka. Waxaan ka hadleynaa meel ku filan nolosha xayawaanka, hawada iyo nadiifinta qalabka, diirimaadka xilliga qaboobaha iyo maqnaanshaha qaylada dheeraadka ah iyo xajinta.
Sidaa awgeed, waxay abuurtay shuruudo sax ah oo loogu talagalay doofaarka Durok, labadaba marka la eego guryaha iyo marka la eego quudinta, kuwa jilicsan ee Maraykanku waxay awoodaan inay kobcaan 400-kiilogaraam qof, boqolkiiba saamiga hilibka iyo unugyada dufanka taas oo u eg 6: 1.
Si kooban oo ku saabsan faa'iidooyinka ugu muhiimsan iyo faa'iido darrida caanaha
Inta ugu muhiimsan mudnaanta Hilibka hilibka doofaarka ah ee doofaarka waa inuu ku jiraa:
Kartida aad u kori karto si dhakhso ah oo aad u hesho miisaanka nool.
La qabsiinta wanaagsan ee xaaladaha kala duwan ee xabsiga, xitaa socodka joogtada ah ee qalinka.
Awoodda ay u leedahay in la helo tiro badan oo ah hilib wanaagsan.
Maqnaanshaha ku dhammaaday ee dufanka subcutaneous.
Xayawaanka xasilinta xayawaanka: ma qaniinaan labada milkiilayaasha ama midba midka kale oo ha u muujin gardarrada xagga farcankiisa.
Kama wadi doonno in doofaarka Duroc kaliya ay yihiin noocyada ugu fiican ee doofaarrada nooca hilibka doofaarka. Si kastaba ha ahaatee, doofaarradan ayaa leh iyaga u gaar ah yaraanta:
Isla mar ahaantaana, beerku wuxuu awoodaa inuu soo saaro tiro yar oo digir ah, tirada ugu badani waxay noqon kartaa 10. Hase yeeshee, tani waxay leedahay faa'iidooyinkeeda, maaddaama tiro yar oo carruur ah ay muujinayaan heerka sare ee badbaadada.
Xayawaanka buuggani waa mid aad u dhib badan cudurada mareenka sare ee neefta.
Heerka miisaanka koritaanka, gaar ahaan horumarinta unugyada muruqyada, waxay ku xirnaan doonaan tirada iyo tayada quudinta borotiinka loo bixiyo doofaarka.
Si habboon u daryeeli doofaarka Duroc
Xayawaankani ma aha kuwo ku foogan mawduuca, maadada khaanadaha furan inta lagu jiro bilaha 5-6 diirimaad oo kuleyl ah ayaa ku habboon iyaga.
Quudinta ayaa u baahan tahay in lagu dheellitiro, oo leh maadada sare ee borotiinka. Inta jeer ee quudinta xilliga qaboobaha waa inay ahaadaan 3 jeer maalintii, xagaaga - 2.
Caanaha ayaa u nugul cudurrada, sidaa daraadeed waa inaysan ogolaan xaddi badan oo cayayaanka iyo boodhka ah, la'aanta hawo nadiif ah iyo qadiimi ah si ay ugu ururaan barniga iyo qalimaanta.
Dhammaan sifooyinka doofaarrada doofaarka ee Pietren
Waa maxay farqiga tani ee doofaarka ee sifooyinka dibadeed?
Xayawaankani xitaa waa la kala saari karaa qaabka jidhka, maadaama uu yahay mid gaaban, laakiin waa ballaaran. Sidoo kale, inkastoo lafaha khafiifka ah iyo lafaha, musqulaha si aad u wanaagsan ayaa loo horumariyay, hamku waa mid aad u ballaaran.
Madaxa waa mid yar, iftiin, oo leh qaab toos ah. Dhegaha Pietrens way kacsan yihiin, marka loo eego xajmiga madaxa ayaa sidoo kale yar yar. Xabadka xayawaanku waa ballaaran, laakiin ma qoto dheer.
Dhabarkooda sidoo kale waa kuwo ballaaran, muruqyo badan. Boca-ka ayaa wareegtay, sidoo kale waxay muujinaysaa saameyn weyn oo hilib ah, oo aan ahayn unugyada.
Midabka maqaarka ee taranka lagu tilmaamay ee doofaarrada ah waxaa laga heli karaa labada cad oo kala duwan. Si kastaba ha noqotee, waxaa la rumaysan yahay in caleemaha la arko ay yihiin kuwo sidan oo kale ah oo loogu talagalay farsamooyinka hiddaha. Sababtan awgeed, inta lagu jiro taranta ballaaran ee Pietrens, waxaa lagu talinayaa in ay u oggolaadaan in caleenta caddaan-cad oo lagu gowraco.
Muuqaalka ugu muhiimsan iyo faa'iidada leh ee noocaan ah waa in doofaarka Pietren kaliya Ma ahan genen ahaan in la soo gaabiyo in lagu uruuriyo nudaha dufanka.
Isla mar ahaantaana, taranka waxaa lagu gartaa astaamaha soo socda:
Miisaanka ragga waawayni waxay gaari karaan 240 ilaa 260 kiiloogaraam, iyo cows - laga bilaabo 220 ilaa 240.
Dhererka jirka waa mid gaaban, celceliska celceliska maalin walba waa 700-750 garaam.
Wax-soo-saarka taranka ama xaddiga hilibka ee laga heli karo iyada oo taranta?
Way adagtahay in la sheego sida faa'iido leh ama aan faa'iido u lahayn in la yiraahdo jinsiga doofaarka ee laga helo qoyska. Wax kasta waxay ku xiran tahay inaad siin karto cuntada muhiimka u ah xayawaanka iyo shuruudaha lagama maarmaanka ah ee xayawaanka.
Guud ahaan, waxaa haboon in la ogaado in beergooyska Pietrain ay leeyihiin faro yar yar - kaliya ilaa 8 deeyriye. Isla mar ahaantaana, hal beere keliya ayaa keligood awoodi kara in uu quudiyo 6 dukaan.
Iyo in kastoo Jiilka dhalinta yar wuxuu leeyahay awood aad u sarreeyaWaxay si tartiib ah u koraan. Haddii aad codsatid naas nuujin, markaa kaliya marka da'doodu tahay 210-240 maalmood, doofaarka ayaa awoodi doona inuu helo 100 kiilo garaam. Laakiin weli, kharashka 1 kiiloogaraam ee koritaanku ma aha mid aad u sarreeya - 4.5-5 quudin.
Sababta keentay daryeelka dareenka ah iyo quudinta degdegga ah, qadarka hilibka ee hal bakhti ah ayaa celcelis ahaan gaaraya 62%, halka xaddiga nudaha dufankuna u dhigmaa kaliya 28%. Kaliya wufuuda qof weyn ayaa miisaamaya 8-9 kiilo.
Waa noocee daryeel ah oo loo baahan yahay doofaarka lo'da ee Petroc?
Dhibaatada ugu weyn ee haysashada caanahani waxay soo ifbaxday arrimaha daryeelka. Xaqiiqdu waxay tahay in xayawaankani ay aad u liita u dulqaadanayaan isku-xirnaanta - maaha kuwo qabow ama kuleylka. On the feed caadiga ah, doofaarkan ma siin doonaa natiijada la doonayo, sidaas darteed waxay u baahan yihiin in la siiyo cunto ma aha oo kaliya nafaqada, laakiin sidoo kale isku dheelitiran oo ku saabsan xubno kala duwan iyo nafaqooyinka kale. Cadaadiska ayaa sidoo kale saameyn xun ku leh koritaanka xayawaanka.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan haadda taranka ee guinea.
Hampshire doofaarka hilibka hilibka: oo ku yaala xuduudaha iyo wax soo saarka
Maxaa ka duwan yahay iyo waxa gaarka ah oo ku saabsan taranka?
Tani waa mid la kala soocayo midabkeedu ugu badan yahay midabka maqaarkan: waxay ku dhowdahay madow, laakiin waxay u badan tahay inay leedahay qayb ballaaran oo caddaan ah oo dhaqdhaqaaqa ku hareereysa jirka oo ku yaala garabka garabka iyo garabka.
Muuqaal khaas ah oo ka mid ah caleemaha waa astaamihiisa madaxa iftiinka qoyan toosan qadar yar.
Dheguhu way yar yihiin, qumman yihiin. Jirka jirka lagu hayo ee doofaarku waa mid aad u dheer, oo leh qadar ballaadhan oo xoog leh. Lugaha xayawaanku maaha mid aad u dheer, laakiin xoog badan, hooves ayaa toosan.
Hoobabka doofaarka ee Hampshire ayaa muujinaya waxtarka ugu sarreeya marka uu u gudbo nabraha kale iyo abuurista khudradda noocan oo kale ah.
Iyadoo si xaddidan daahir leh, waxsoosaarkooda sare ma muuqan, si kastaba ha ahaatee, qaybaha ugu muhiimsan ee shakhsiyaadkaan ka mid ah, tan soo socota waa in la xuso:
Xayawaanku badiyaa waxay leeyihiin qiyaas dhexdhexaad ah, inkastoo marka la barbardhigo korka kor lagu sharraxay ay yihiin dherer. Dooggu wuxuu gaari karaa miisaanka ugu sarreeya 310 kiilo, iyo beerid - 250.
Inkasta oo jiilka yar ee Hampshire ay u muuqdaan kuwo aad u xoogan, illaa ay gaaraan da'da 8 bilood waxay muujinayaan koritaan qunyar ah, inkasta oo ay si dhakhso ah u bilaabaan inay helaan miisaanka jirka.
Sidee faa'iido u tahay in la jebiyo doofaarrada Hampshire: doodaha ugu muhiimsan iyo doodaha miiska
Argagixisada loogu talagalay isticmaalka noocaan ah ee qoyska ayaa noqon doona Caanaha waa mid la qabsoomay. Waxaa lagu hayn karaa xaalad kasta, kiis kasta, waxay awoodi doontaa inay bixiso natiijooyinka ugu badan (haddii, dabcan, ha ilaawin quudinta lagama maarmaanka ah).
Intaa waxaa dheer, xayawaankan xitaa waa la daadin karaa daaqa. Sida hiddaha hilibka, Hampshires waxay siiyaan gebi ahaanba hilibka hilibka, oo leh lakabyo dhuuban oo ah nudaha dufanka. Haddii aad u isticmaasho quudintooda tayo sare leh oo isku dheelitiran, kordhinta maalin walba waxay u dhexeysaa 900 ilaa 950 garaam.
Kakanaanta mowduuca ee been abuurka ah ee la sheegay in xaqiiqda ah in xayawaankan aad u xishood badan. Xaaladaha quudinta guud guud ahaan waxay keeni karaan miisaan lumis ah, hoos u dhaca koritaanka.
Sidoo kale, doofaarrada doofaarka Hampshire waxaa lagu gartaa bacriminta celcelis ahaan. Caadi ahaan hal qashin waxaa jira wax ka badan 8 doofaar oo kaliya, xaaladaha dhifka ah ee tiradani waxay gaari kartaa tirada 10-12 qof.
Laakiin, inkastoo tani, ubaxyada ayaa muujinaya doorka hooyooyinka aadka u xanaaneeya, awood u leh in ay baxaan oo ay si fiican u quudiyaan tiro kasta oo caruur ah.
Waxaan siinnaa xayawaan daryeel leh.
Qodobka weyn ee dheeraadka ah ee noocaan ah waa in ay aad u adag tahay. Xitaa haddii ay ka kooban yihiin qalimaan furmo ah ha ka baqin in xayawaanku jiran karo.
Naqshaduhu maaha kuwo cabsi leh. Hase yeeshee, waa inaadan iloobin nadaafadda iyo tallaabooyinka kale ee nadiifinta, maadaama ay jirto xaalad kasta oo ay noqon doonto il toos ah oo cudurro ah.
Noocyada kale ee doofaarrada hilibka ah ee ku haboon inay dareenka siiyaan
Doofaarriga dhuleed: sifooyinka guud
Maya wax caan ah oo wax soo saar lehna sidoo kale waa mid ka mid ah doofaarrada nooca hilibka lo'da Landrace.
Markay qaan-gaadhka tahay, boorka ayaa si fudud u gaari kara 310 kiilo garaam.
Beeraha ayaa awood u leh inay bixiyaan faro badan oo badan - qiyaastii 12 doofaarro.
Miisaanka maalin walba wuxuu noqon karaa ilaa 700 garaam, halka kharashka 1 kg ee miisaankiisu uu yahay 3,9-4 halbeeg oo cunto ah.
Dibedda, doofaarkan waxay leeyihiin midab khafiif ah.
Tani waxay leedahay mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee nooca hilibka.
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee doofaarka Tamworth
Doofaarka Tamworth ah ayaa sidoo kale waa xusuus ah.
Sida doofaarrada doofaarka oo dhan, waxay leeyihiin qaab dhismeedka jirka oo xoog leh iyo muruqyo si fiican u horumarsan. Dhererka jirka oo dhan qof weyn oo qaangaar ah ayaa ku kala duwan 1 ilaa 1.4 mitir.
Tani waa mid ka mid ah noocyada kala duwan ee doofaarrada hilibka, oo midabkuna wuxuu ku kala duwanaan karaa midab casaan ah ilaa guduud mugdi ah, waxaadna arki kartaa shakhsiyaadka leh maqaarka cad, kaas oo lagu daboolay dhibco madow oo xagga danbe ah.
Muddo 7-8 bilood ah, doofaarka waxay si fudud u gaari karaan miisaanka 100 kiilogaraam.